Ukulinganisa ukulinganisa Inkcazo kunye nemizekelo
I-Glossary Glossary Inkcazo ye-Equation Equation
Ukulingana okulinganayo kukulingana kwindlela yokuphendula ngamakhemikhali apho inani lee- athomu ngalinye liyakwazi ukusabela kwaye ixabiso elipheleleyo lilinganayo kubo bobabini abasabelayo kunye nemveliso . Ngamanye amagama, ubunzima kunye necala lilinganayo kumacala omabini.
Kwaziwa nangokuthi: Ukulinganisa i-equation, ukulinganisa ukuphendula , ukulondolozwa kwerhafu kunye nobunzima.
Imizekelo yokungalingani nokulingana okulinganayo
I-equation engalinganiyo yeekhemikhali ibonisa i-reactants kunye nemveliso kwi-chemical response, kodwa ayithethi imali efunekayo ukuze anelise ukugcinwa kobunzima. Ngokomzekelo, lo mlinganiso wempendulo phakathi kwe-iron oxide kunye nekhabhoni yokwenza isinyithi kunye ne-carbon dioxide ayinakulinganiswa ngokumalunga nobukhulu:
Ukulingana kukulinganisela ukuhlawulwa, kuba zombini macala e-equation ayinayo ion (inkokhelo engekho emthethweni).
I-equation ine-atom ye-2 yerinki kwinqanaba le-reactants ye-equation (kwesobunxele kwetolo), kodwa i-athomu yesinyithi kwi-side products (ngakwesokudla kwetolo). Ngaphandle kokubala inani lamanye ama-athomu, unokuxelela ukuba i-equation ayilinganisekanga. Injongo yokulinganisa i-equation kukuba nenani elifanayo linye i-atom nganye kwicala lasekhohlo kunye nelungileyo letolo.
Oku kufezekiswa ngokutshintsha ii-coefficients ze-compounds (iinombolo ezibekwa phambi kwefomula ifom).
Imirhumo ayiguqukanga (amanani amancinci ukuya kwesokudla kwee-athile ezithile, njengetsimbi kunye ne-oksijini kulo mzekelo). Ukutshintsha iincwadi ziza kuguqula i-chemical name of the compound!
Bobabini ngamacala asekhohlo kunye namanqanaba e-equation anama-4 Fe, 6, nee-athi ze-C.
Xa ulinganisela ukulingana, yinto efanelekileyo ukujonga umsebenzi wakho ngokuphindaphinda i-atom nganye nge-coefficient. Xa kungekho ncwadana ekhankanywe, cinga ukuba ngu-1.
Kwakhona kusemgangathweni ukuchaza imeko yombandela ngamnye. Oku kubhalwe kwiibhareneses ngokukhawuleza emva kolu hlobo. Umzekelo, ukusabela kwangaphambili kunokubhalwa:
2 Fe 2 O 3 (s) + 3 C (s) → 4 Fe (s) + 3 I-CO 2 (g)
apho kubonisa ukuqina kunye g yerhasi
Umzekelo olinganayo we-Ionic Equation
Kwizisombululo ezinomdla, kuqhelekile ukulinganisela ukulingana kwamakhemikhali kokubini kunye nokuhlawula. Ukulinganisela ubuninzi buvelisa inani elifanayo kunye neentlobo zee-atom kumacala omabini alinganayo. Ukulinganisela ukuhlawulwa kwemali kuthetha ukuba inkokhelo ye-net is zero kumacala omabini alinganayo. Umbandela wemeko (aq) imele i-aqueous, ebonisa ukuba ion iiboniswa kuphela kwi-equation nokuba ziphakathi kwamanzi. Umzekelo:
Ag + (aq) + NO 3 - (aq) + Na + (aq) + Cl - (aq) → AgCl (s) + Na + (aq) + Hayi 3 - (aq)
Khangela ukuba i-equon equation iyalinganisela ukuhlawulwa ngokubona ukuba zonke iindleko ezilungileyo kunye nezimbi zikhansela elinye icala kwicala ngalinye. Ngokomzekelo, kwicala lasekhohlo le-equation, kukho iindleko ezi-2 ezifanelekileyo kunye neentlawulo ezi-2 ezingekho phantsi, oku kuthetha ukuba inkokhelo yomnxeba ngakwesobunxele ayikho nto.
Ngakwesokunene, kukho inxalenye engathathi hlangothi, enye into efanelekileyo, kunye nokuhlawula okungekho nto, kwakhona ukunika imali yentlawulo ye-0.
Ubilise Amanzi kwiHolo lokuHlala
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ze-Connecticut
UJanam Naam Sanskar (iSikh Baby Naming Ceremony)
Ulonga ngoEva Bunting
Incwadi Yobuntu Ubhala Inkcazo
Xa uthetha nge-loup